PERIKOPA FJKM ALAHADY 21 AOGOSITRA 2016 | FJKM Amboniloha
2 Samoela 10,9-19 / Matio 18,18-20 / Filipiana 1,1-8
9 Ary raha vao nihodina niala tamin’i Samoela izy, dia nomen’Andriamanitra fo vaovao; ary tonga avokoa androtrizay ihany ireo famantarana rehetra ireo.
10 Ary rehefa tonga tany Gibea, izy indro, ny mpaminany maro irai-dia nifanena taminy; dia nilatsaka tamin’i Saoly ny Fanahin’Andriamanitra, ka naminany teo aminy izy.
11 Ary nony hitan’izay rehetra nahalala azy hatramin’ny taloha fa, indro, maminany eo amin’ny mpaminany izy, dia nifampilaza ny olona ka nanao hoe: Inona izao tonga amin’ny zanak’i Kisy izao? Saoly koa va mba isan’ny mpaminany?
12 Ary ny anankiray teo namaly hoe: Fa iza moa no rain’ireny? Ary izany no nisehoan’ny fitenenana hoe: Saoly koa va mba isan’ny mpaminany?
13 Ary rehefa nitsahatra naminany Saoly, dia nankeo amin’ny fitoerana avo.
14 Ary hoy ny rahalahin-drain’i Saoly taminy sy tamin’ny mpanompony: Taiza no alehanareo? Ary hoy izy: Nitady ny boriky izahay; ka nony tsy hitanay izy, dia nankany amin’i Samoela izahay.
15 Ary hoy ny rahalahin-drain’i Saoly: Masìna ianao, lazao amiko izay nolazain’i Samoela taminao.
16 Dia hoy Saoly tamin’ny rahalahin-drainy: Nolazainy marimarina taminay fa efa hita ny boriky. Fa ilay nolazain’i Samoela ny amin’ny fanjakana tsy mba nambarany taminy.
17 Ary Samoela namory ny vahoaka ho any Mizpa ho any amin’i Jehovah
18 ka nanao tamin’ny Zanak’Isiraely hoe: Izao no lazain’i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely: Izaho nitondra ny Isiraely niakatra avy tany Egypta ka namonjy anareo tamin’ny tanan’ny Egyptiana sy tamin’ny tanan’ny fanjakana rehetra izay nampahory anareo.
19 Nefa ianareo kosa efa nandà an’Andriamanitrareo androany, Izay mamonjy anareo amin’ny zavatra manjo anareo sy ny fahorianareo rehetra; fa hoy ianareo taminy: Tsia, fa manendre mpanjaka ho anay. Koa ankehitriny, mijanòna eo anatrehan’i Jehovah araka ny firenenareo sy ny arivonareo avy.
18 Lazaiko aminareo marina tokoa: Na inona na inona fehezinareo etỳ ambonin’ny tany dia hofehezina any an-danitra; ary na inona na inona vahanareo etỳ ambonin’ny tany dia hovahana any an-danitra.
19 Ary lazaiko aminareo koa: Raha misy roa aminareo mifanaiky etỳ ambonin’ny tany na amin’inona na amin’inona ka hangataka izany, dia ho azony avy amin’ny Raiko Izay any an-danitra izany.
20 Fa na aiza na aiza no iangonan’ny roa na telo amin’ny anarako, dia ao afovoany Aho.
1 [Fitarihan-teny sy fiarahabana ary fisaorana] Paoly sy Timoty, mpanompon’i Kristy Jesosy, mamangy ny olona masina rehetra ao amin’i Kristy Jesosy mbamin’ny mpitandrina* sy ny diakona izay any Filipy; [* Gr. episkopo]
2 ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompo.
3 Misaotra an’Andriamanitro amin’ny fahatsiarovako anareo
4 mandrakariva aho amin’ny fivavahako rehetra ho anareo rehetra, ka mangataka amin’ny fifaliana,
5 noho ny firaisanareo hampandroso ny filazantsara hatramin’ny andro voalohany ka mandraka ankehitriny;
6 ary matoky indrindra aho fa Izay nanomboka asa tsara ao anatinareo no hahatanteraka izany mandra-pihavin’ny andron’i Jesosy Kristy;
7 fa marina izany fiheverako anareo rehetra izany, satria efa mby ato am-poko ianareo, fa mpiombona ny fahasoavana ananako ianareo rehetra, na amin’ny fifatorako, na amin’ny famaliako hahafa-tsiny ny filazantsara sy ny fampianarako hahamafy orina azy.
8 Fa Andriamanitra no vavolombeloko fa manina anareo rehetra indrindra aho amin’ny famindram-pon’i Kristy Jesosy.
Catégories :	Perikopa FJKM	/ par AnjGab 16 août 2016